Nghọta iskpụrụ bụ Igodo nke Mgbasa Ozi Ọma | Martech Zone
Nghọta ceptionkpụrụ bụ Igodo nke Marketingzụ ahịa Na-aga nke Ọma
Fraịde, Jenụwarị 1, 2021 Saturday, January 2, 2021 Douglas Karr
Mgbe mbụ mụ na ndị mụrụ m gara Chicago na afọ ndị gara aga, anyị mere nleta bịara Sears Tower (nke a maara ugbu a dị ka Ugwu Willis). Ije ije na mgbochi na ụlọ ahụ ma na-ele anya - ị na-amalite iche echiche banyere ihe ebube nke injinia ọ bụ. O ruru nde ụkwụ anọ na narị nde isii na nde iri isii na isii, akụkọ dị 4.56, were afọ 110 wuo ma jiri ihe zuru oke iji mee okporo ụzọ asatọ, nke dị kilomita ise.
Mgbe ahụ ị ga-esi na igwe mbuli na gbagoo 103 ala na Skydeck. N'oge ahụ, 1453 ụkwụ n'elu ala, ịchefu banyere ụlọ ahụ. Ilegide anya na Chicago, Lake Michigan, ihu igwe na-asọpụ gị. Echiche ahụ na-agbanwe kpam kpam site na isi ụlọ ahụ ruo n'elu ya.
Enwere nsogbu na nghọta… ọ na-edugharị anyị. Ọ bụrụ na ị na-eguzo mgbe niile na ala nke Willis Tower, ị gaghị enwe ekele maka obodo dị egwu ị na-eguzo. Anyị na-eme nke a dị ka ndị ahịa. Anyị na-etinyekarị ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ ngwaahịa ya ma ọ bụ ọrụ ya dị ka etiti nke ndụ ndị ahịa anyị. Anyị chere na anyị bụ ụlọ kacha ibu n’ụwa. Anyị nwere ike buru ibu, mana n'obodo - ị bụ naanị otu n'ime ọtụtụ puku ụlọ.
Mgbe ụfọdụ, ndị ahịa anyị na-ajụ anyị gbasara ịzụlite netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta nkeonwe, nke ndị ahịa. Ọ na-awụ ha akpata oyi n'ahụ́ ma anyị gwa ha na ha adịghị mkpa. Ha na-akpọpụta ọtụtụ puku ndị ahịa ha nwere, ndị na-eguzo na ụlọ ọrụ ahụ, ndị ọkachamara ha nwere na ndị ọrụ, ọnụ ọgụgụ oku ekwentị ha nwetara, ọnụ ọgụgụ hits na weebụsaịtị ha, yada, yada, yada. Ha weputara netwok… o dighi onye choro. Ọ dịghị onye na-abịa. Ugbu a, ọ bụ ego ego ha na-eme ihere… ya mere, ha na-eme ihe dịka ịmanye ndị ahịa ka ha jiri netwọkụ ahụ kwado ihe, banye na ya na akpaghị aka, ma manye ndị njikwa ọrụ ka ha kwuo otu nnukwu netwọkụ na-eto. Rie ude.
Ọ bụrụ na ha ghọtara echiche nke ndị ahịa ahụ, ha agaraghị ala n'okporo ụzọ ahụ. Ha ga-ama na ha bụ akụkụ pere mpe nke ụbọchị azụmahịa ndị ahịa. Ikekwe ha dabara n'ime oghere nkeji 15 otu ugboro n'izu ka ndị ahịa wepụtara iji ngwaahịa ha. Ọ bụrụ na ha ghọtara nghọta nke ndị ahịa ha, ikekwe ha ga-akwagide na-eme mkparị ma na-anabata mkpa ndị ahịa ha kama itinye ego na ihe ndị ahịa ha achọghị ma ọ bụ na-achọghị. Kama ịmepụta netwọkụ mmekọrịta, ikekwe ha gaara mepụta nchịkọta akụkọ ka mma, ngalaba Ajụjụ, ma ọ bụ wepụta vidiyo ndị ọzọ etu esi arụ ọrụ ha kacha mma.
Nghọta abụghị naanị ịge ndị ahịa gị ntị, ọ bụ maka ịghọta azụmahịa gị site n'ọnọdụ ha:
Ghọta otu, mgbe, na ihe kpatara ha ji eme gị.
Ghọta ihe ha hụrụ gị n’anya na ihe na-ewute ha.
Ghọta ihe ga-eme ka ndụ ha dịrị mfe isoro gị rụọ ọrụ.
Ghọta otu ị ga - esi nye ha uru karịa.
Mgbe ị chọpụtara nke ahụ, jiri usoro ahụ zụọ ahịa gị. Ikekwe ị ga - aka mma ịghara ị depụta atụmatụ 438 ị gbakwunyere na mwepụta kachasị ọhụrụ - ma kweta na ị maara na ndị ahịa gị ji ọrụ dị mkpa karị… mana maka oge 15 ha chọrọ gị, ị nọ mgbe niile .
Tags: Chicagonzaghachi ndị ahịaechiche ndị ahịaegenghọtaụlọ elu searswillis ụlọ elu
Gịnị Bụ Ofdị Weebụ (Ọchịchịrị, Miri, Mkpa, na Clear)?
Mar 14, 2013 na 4: 58 AM
Ekwenyere m kpamkpam na gị Douglas! Ọ gwụla ma ị matara onye ahịa gị yana ihe bụ ọrụ gị na ndụ ha, ị gaghị enwe ike mepee mkpọsa ahịa na-aga nke ọma. Echiche ha banyere ụlọ ọrụ gị dị mkpa iji nwee ọganiihu n'ahịa siri ike.
Mar 14, 2013 na 7: 34 AM
fabulous post (dị na mbụ), Doug!